UNick unezimvo eziyi-504 zezinye iindawo.
Igumbi lokulala eli-1 (A/C)
Ukulala 2 + 1
(INR 500 / iindwendwe / ubusuku kwindwendwe +1) - Ukutya ngumgcini kwintlawulo
IHivehomes George's Arabica, Robusta kunye neLiberica ziindlwana ezibekwe kwipropathi eyi-4.5 yeehektare ezinezityalo ezijikelezayo. Umlambo waseKabini uhamba ngeemitha ezingama-200. ILiberica yongezwa ngo-Epreli 2018
Suka kubuphithiphithi bobomi besixeko kwaye ube namava okuzola kunye nokuzola kwehlathi. Yiba ngumntu okhululekileyo kwakhona. Fumana konke oku kubuthuthuzeleko obunikezwa yile mihla.
I-cottage itholakala kwipropati ye-4.5 ye-acre enezityalo ezijikelezayo ezifana ne-ginger, i-tapioca, i-yam, njl kunye ne-rubber kunye nekhofi kunye namanqaku emithi yaseMahagony kwidolophana ebizwa ngokuba yi-Bavali kufuphi nedolophu yaseKatikulam malunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka eMananthwady. Ipropathi ingaphandle kohola wendlela ekungeneni kweKerala kwindlela iMysore-Mananthwady.
ISithili sase-Wynad ngummandla we-bio-diverse osasazeke kwi-2,132 yeekhilomitha zesikwere kwi-Western Ghats ephakamileyo, i-Wynad sesinye sezithili ezimbalwa e-Kerala ekwazileyo ukugcina ubume bayo obucocekileyo. Zifihlwe kwiinduli zeli lizwe zezinye zezizwe ezindala, ezingekachukunyiswa yimpucuko. Kwaye imizobo yokuqala yembali eKerala efunyenwe kumazantsi eentaba ze-Edakkal kwaye kufutshane ne-Ambukuthimala inika ubungqina benkcubeko yangaphambili esusela kwiXesha leMesolithic. Ibukeka ngendlela emangalisayo, iyaziwa ngeendawo zayo eziphantsi kweTropikhi, izikhululo zeenduli ezintle, amasimi eziqholo, amahlathi ashinyeneyo kunye nezithethe ezityebileyo zenkcubeko. Indibano epheleleyo yentlango, imbali kunye nenkcubeko, iWayanad ikwincam esemazantsi yethafa leDeccan elimangalisayo.
Kukho izindlu zangasese ezimbini ezinokuhlala iindwendwe ezi-2 inye. Unokufumana kwakhona isibonelelo sokongeza ibhedi eyongezelelweyo emgangathweni. Iimpawu eziphawulekayo zale cottage zinikwe ngezantsi. Ngelixa sisenza oko sifuna ukubonakala ekuhleni kwaye sisondele kwimeko yokwenyani ukuze ngaphezu kwayo yonke enye into ube nexabiso elithembekileyo lemali. Sizamile ukugxila kucoceko kunye nococeko ngaphandle kokuthomalalisa kulonwabo lomzimba olufanelekileyo ukuphumla, ukuphumla kwaye ukonwabele ukuthula. Siyathemba ukuba uya kuphinda wenze okufanayo ngelixa uhlala apho. Ngokuphathelele ukutya, yinjongo yethu ukukunika ipalethi enencasa.
Umgcini kunye nosapho lwakhe bahlala kufutshane kwaye bayafumaneka ngalo naluphi na uncedo kuquka nokutya. Nceda uqaphele ukuba ukutya kuya kuhlawuliswa ngaphezulu. Yinjongo yethu ukukunika incasa yephalethi yasekhaya, abantu kunye nezinto kwaye hayi inkangeleko entle. Siyathemba ukuba uya kuxabisa okufanayo.
Umgcini kunye nosapho lwakhe bahlala kufutshane kwaye bayafumaneka ngalo naluphi na uncedo kuquka nokutya. Nceda uqaphele ukuba ukutya kuya kuhlawuliswa ngaphezulu. Yinjongo yethu…